Albert iyo Kupfer: 2 jaangooyooyin aad u fiican oo lagu beddelan karo Cerebro | Laga soo bilaabo Linux
Iyadoo aan loo eegin, nooca Nidaamka hawlgalka in aan isticmaalno iyo xitaa kumbuyuutar, waayo qofna ma qarsoona, taas oo had iyo jeer ka fiican isticmaal kiiboodhka qaab horusocod ah in isticmaalka ugu badan ama ku dhowaad gaar u ah jiir (jiir).
Iyo sababtaas awgeed, in badan Nidaamyada Howlgalka iyo Codsiyada, waxa loogu yeero toobiyeyaasha kiiboodhka (hotkeys) ama wicitaanada ayaa la abuuray Launchers, ficillada ama codsiyada, si hagaajinta wax soo saarka isticmaalaha. Inaga GNU / Linux Distros waxaan haynaa tusaalooyin wanaagsan, midkoodna waa codsigii loo yaqaan "Maskaxda", oo aan dhawaan kahadalnay waanu kahadalnay, iyo kuwa kale oo badan oo aan maanta kahadleyno. Waxay kala yihiin "Albert iyo Kupfer".
Mawduuca ah wax soo saarka isticmaalaha ku saabsan Nidaamyada Hawlgalka ee kala duwan, waxay u noqon kartaa wax aan fududayn isticmaalaha guud, laakiin kuwa iyagu ah xirfadlayaasha teknolojiyadda ama meelaha kale ee shaqada, waa muhiim kuma lug laha ficillada la xiriira isticmaalka degdegga ah ee qasabadaha jiirka si loo sameeyo waxqabadyo maalinle ah oo soo noqnoqda ama meerto ah.
Marka la eego, GNU / Linux Distros, ka mid ah kuwa kale oo badan muuqaalada heer sare ah, wuxuu leeyahay xulashooyin heer sare ah barnaamijka ama fureyaasha waxqabadka si looga takhaluso howlaha noocan oo kale ah yareynta isticmaalka jiirka, waxqabadyada sida, u gudub liiska arjiga oo aad dalab sameyso ama aad xarunta aaddo oo aad amar bixiso.
1 Pitchers: Albert iyo Kupfer si loo kordhiyo wax soo saarka
1.3 Ruwaayado kale oo muuqaal ah
Pitchers: Albert iyo Kupfer si loo kordhiyo wax soo saarka
Sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda degel rasmi ah, Albert waa Launcher lagu tilmaamay sida soo socota:
"Launcher awood u leh inuu ku helo wax walba dadaal la'aan. Sidaa awgeed, waxay awood u leedahay inay socodsiiso codsiyada, furitaanka faylasha ama dariiqyadooda (fayl / tilmaamaha), furitaanka calaamadaha bog furaha, raadinta shabakadda, xisaabinta waxyaabaha, iyo waxyaabo kaloo badan. Albert waa kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutar ah, oo hadafyadiisu yihiin adeegsiga iyo quruxda, waxqabadka iyo ballaadhinta. Waxay ku qoran tahay C ++ waxayna ku saleysan tahay qaab dhismeedka Qt. Waxaa lagu horumariyey ruqsadda GPL, 100% bilaash iyo ilo furan".
Waqtigan xaadirka ah waxaa loogu talagalay nambarka xasilloon ee 0.16.1 Taariikhda 12 / 2018, oo waliba iska leh degel ku yaal GitHub.
Sida laga soo xigtay horumariyayaasheeda degel rasmi ah, Kupfer waa Launcher (Launcher) lagu tilmaamay sida soo socota:
"Kupfer waa is-dhexgal si dhakhso ah oo sahlan oo marin loogu helo codsiyada iyo dukumintigooda. Isticmaalka ugu caansan waa in la helo codsi gaar ah oo la furo. Waxaan isku daynay inaanu Kupfer ka dhigno mid fudud oo lagu kordhiyo waxyaabo dheeri ah si qaabkan deg degga ah loogu gaadho walxo badan oo aan ahayn kaliya codsiyada. Waxaan rajeyneynaa in adeegsiga Kupfer ay tahay wax lagu farxo. "
Waqtigan xaadirka ah waxaa loogu talagalay nambarka xasilloon ee 3.19 Taariikhda 03 / 2017, oo waliba iska leh degel ku yaal GitHub.
Ruwaayado kale oo muuqaal ah
Haa adiga, sababo jira awgood uma isticmaali doontid sida barnaamijka launcher a Maskaxda, Albert ama Kupfer, waxaa la doorbidaa inaad doorato mid la mid ah Ulaunchersida, kuwa kale oo dhami ay aad uga badan yihiin waqtigoodii, la dayacay, ama la cusbooneysiiyay laakiin waxaa loogu talagalay jawi desktop gaar ah. Ulauncher Waa casriyeyn casri ah, oo casriyeysan, oo la taageeray, waxay leedahay waxyaabo badan oo lagu daro oo kuma xirna deegaan Desktop gaar ah. Sidaa darteed, waxaan dhawaan soo daabici doonnaa wax ku saabsan.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Albert y Kupfer», kuwaas oo ah 2 aad u fiican codsiyada wax soo saarka nooca Launchers, sida ugu fiican Maskaxda iyo Ulauncher; noqo wax badan dan iyo utility, Dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Albert iyo Kupfer: 2 jaangooyooyin aad u fiican oo lagu beddelan karo Cerebro
Hagaag, haddii Kupfer aan dib loo cusbooneysiin muddo dheer, waxaan qiyaasayaa in mar horeba laga tagi doono, taasi p ...
Salaan Teo! Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay nuxurka oo ay waxtar laheyd.
Dhab ahaantii qaar badan oo ka mid ah kuwa wax fura ayaa ku jira xaalad baraf ah ama laga tagay. Kuwa sii sii casriyeysan ee shaqeynaya aniga ahaan, Cerebro iyo Ulauncher. Kala go'ay ama wada jir waxay ku fiican yihiin faahfaahintooda, taas oo hubaal ku xirnaan doonta Distro meesha looga adeegsan karo. Waxaan ku wada isticmaali doonaa kumbuyuutarkeyga, maxaa yeelay wax dhib ah ima aysan siin, maxaa yeelay xoogaa xoog ayey u shaqeeyaan waxayna ku shaqeeyaan si kaamil ah My MilagrOS 2 (MX Linux 19).
Waxaan door bidaa Ulauncher
Salaan Logan! Sida aad halkaas ku arki karto waxaan kugula talinay Ulauncher laakiin ma ahan bedelida Maskaxda laakiin waa dhameystir, maadaama Ulauncher uu cuno waxyaabo badan oo xusuusta RAM ah. Waxaan kugula talin lahaa inaad u isticmaasho iyada oo aan kordhin la wadaagin Cerebro.
Firefox 77, oo ah nuqul leh isbeddelo inta badan loogu talagalay horumariyeyaasha
Stratis 2.1 waxay la timaaddaa taageero loogu talagalay qaybinta qaybinta iyada oo la adeegsanayo LUKS2